प्रियंका चोपडालाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय धोकेबाज कलाकार’ र ‘सम्पत्तीको भोको’ बताउने म्यागजिनले माफी माग्यो « Khasokhas Follow @khasokhasmag
– सन् २०१६ मा निकले प्रियंकाको ट्वीटरमा डायरेक्ट मेसेज गरे । जवाफमा प्रियंकाले आफ्नो पर्सनल नम्बरमा टेक्स्ट गर्न भनिन् किनभने उनको ट्वीटर उसको टीमले हेर्दथ्यो । मारिया स्मिथका अनुसार यो प्रियंका हलिउडमा प्रवेश गरेपछिको अहंकारको परिचय हो । स्मिथले प्रश्न गरेकी थिइन्, ‘एक सेलिब्रिटीलाई उनले कसरी अर्को ठाउँमा मेसेज गर भन्न सकिन् ।’
– प्रियंकालाई सेल्फ मेड अर्थात् आफ्नै मेहनतले सफल भएकी महिला बताइन्छ । यस्ती महिला भइकन पनि उनी आफ्नो विलासी जीवनशैलीका लागि किन यति धेरै खर्चिन्छिन् ?
– निक जोनसको आफूभन्दा बढी उमेरका महिलासँग डेट गर्ने गरेको इतिहास नै छ । तर प्रियंका, जो अहिलेसम्म आफ्नो नीजि जीवनबारे चुप थिइन्, उनी अचानक यति धेरै कुराकानी किन गर्न थालिन् ?
– प्रियंकाले निकलाई विवाहका बेला घोडामा चढाइन् किनभने उनी एक खराब महिला हुन् ।
– प्रियंका पैसाको भोकी हुन् त्यसकारण विवाहलाई बेचेकी हुन् । निकले यसको विरोध गर्नुपर्दथ्यो तर बिचरा प्रेममा अन्धो छन् ।
– प्रियंका एक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको धोकेबाज कलाकार हुन् ।